पर्साको पश्चिमी क्षेत्रका एक वडाध्यक्षले लगाए भारतसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा काँडेतार
काठमाडाैं, २ जेठ। लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले मिचेको सीमाको विषयलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउनुपर्ने भन्दै विरोधको आवाज उठिरहेको बेला पर्साको पश्चिमी क्षेत्र ठोरी गाउँपालिकाका एक वडाध्यक्षले भारतसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा काँडेतार नै लगाइदिएका छन् । ठोरी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष सूर्य लामाले भारतको विहारसँग सीमा जोडिएको वडा–३ अन्तर्गत पर्ने ठुटेखोला नजिकैको पिल्लर नम्बर ४३५/१ देखि ४३१/४ सम्मको..
ठूला व्यापारीबाटै ठगिए उपभोक्ता, उजुरीपछि मात्रै बजारमा सरकारी अनुगमन
काठमाडाैं, २ जेठ। अतिआवश्यकीय वस्तुको आपूर्ति सहज भएको बेला पनि उपभोक्ता कृत्रिम महँगीको मारमा परेका छन । उजुरी आएपछि मात्रै बजारमा सरकारी अनुगमन तथा नियमनकारी निकाय पुग्ने अन्यथा नजाने गरेका कारणले व्यापारीले तोकिएको अधिकंतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएर खाद्यवस्तु खुलेआम विक्री गरिरहेका छन । यस्तै निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पतालले पनि सेवाग्राहीसँग मनपरी शुल्क लिने गरेका छन । उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा मङ्गलबार सरकारी..
आज संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यत्रम प्रस्तुत हुने
काठमाडाैं, २ जेठ। सरकारको नीति तथा कार्यत्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरिने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अपराह्न ४ बजे संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यत्रम प्रस्तुत गर्ने छिन् । नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न संसद् सचिवालयले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ । कोरोना जोखिमका कारण भौतिक दूरी कायम राखेर सञ्चालित भइरहेको बैठकमा अधिकतम सुरक्षा विधि अपनाइएको सचिवालयको भनाइ..
राष्ट्रसंघ दस्ताबेजमा भेटियाे काली नदीवारि नेपाल
न्युयोर्क, २ जेठ। नेपालले सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता पाएको हो। नेपालले सन् १९४९ मा सदस्यताका लागि आवेदन दिएको भए पनि तत्कालीन सोभियत संघको कारण नेपालले सदस्यता पाउन ६ वर्ष संघर्ष गर्नुपरेको थियो। राणाकालीन अवस्थामै पठाइएको उक्त पत्रमा तत्कालीन डाइरेक्टर जनरल (परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियत) को रूपमा विजयशमशेर राणाले तत्कालीन मेजर पदमबहादुर खत्रीलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाएका थिए। मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री..
आफै ग्राहक बनेर समात्यो प्रहरीले सय किलो चरेश
काठमाडाैं, १ वैशाख। नेपाल प्रहरीले धादिङबाट ठूलो मात्रामा लागुऔषध चरेश बरामद गरेको छ । विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण न्यून गर्न लागू गरिएको लकडाउनको मौका छोपी अवैधरूपमा लागुऔषध ओसारपसार भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले धादिङको गजुरीबाट १ सय किलो चेरश बरामद गरेको हो । चरेश किन्ने ग्राहक बनेर प्रहरीले धादिङको गजुरी गाउँपालिका–५ दरिङ्गल खोलाको पुलबाट १ सय किलो..
बर्दियाकाे एक क्वारेन्टाइनबाट युवती फरार
बर्दिया,१ जेठ। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका– ८ शिवदुर्गा माध्यमिक विद्यालय दुर्गापुरमा रहेको क्वारेन्टाइनबाट आज बिहान एक युवती फरार भएकी छन् । उनी भागेको जानकारी पाउनासाथ खोजी भइरहेको वडाध्यक्ष विजय रानाले बताउनुभयो । काममा रहेका प्रहरी शौच गर्न गएको मौका छोपी युवती फरार भएकी हुन् । विद्यालयमा ४३ शय्या रहेकामा अहिले त्यहाँ पाँच जना मात्र छन् । तीमध्ये चार पुरुष र एक महिला..
कोरोना संक्रमित महिला बसेको कैलालीको एक टोललाई सील गरियो
१ जेठ, कैलाली । कन्चनपुरबाट कैलालीको अत्तरिया हुँदै काठमाडौं गएकी एक महिलालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अहिले अत्तरियाको विजयनगर टोललाई सिल गरिएको छ । वैशाख २८ गते कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका १० बाट काठमाडौं जाँदा उनी बसेको स्थानलाई बुधबार सिल गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीले जानकारी दिएको छ । ‘काठमाडौँ जान हिँडेकी महिला यहाँ बसेकी थिइन् । उनलाई संक्रमण भएपछि हामीले यो..
नेपालमा एकैदिन ७ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, काठमाडौं र कपिलबस्तुमा गरी बिहीबार ७ जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बिहान पौने ८ बजे सार्वजनिक गरेको अध्यावधिक विवरणअनुसार सर्लाहीको धान्कौल नगरपालिकाका २५ वर्षीय पुरुष, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका र मिथिला नगरपालिका निवासी क्रमशः ४० वर्षीय पुरुष र २० वर्षीया महिलामा कोरोना..
भारतले पूर्वको पाँचथरमा पनि नेपाली जमिनमा कब्जा गरेको छ
फिदिम : पश्चिम नेपालको लिपुलेक कब्जा गरेर सडक बनाएको भारतले पूर्वको पाँचथरमा पनि नेपाली जमिनमा आधिपत्य जमाएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाको नेपाली भूमि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले कब्जा गरेको हो। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको नक्साबमोजिम सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमि भारतमा परेको उसको दाबी छ। एसएसबीले फालेलुङ गाउँपालिका–६ को सन्तकपुर आहालगैरी क्षेत्रको नेपाली भूमिमा आधिपत्य जमाएको छ।..
सशास्त्रको टोली सिमा रक्षाको लागी दार्चुलाको छाङरु पुग्यो
बुधबार, बैशाख ३१, २०७७ साल
काठमाडौं : दार्चुलाको छाङरुमा सुरक्षाकर्मीको टोली पुगेको छ। बुधबार नेपाल प्रहरीको ९ जना र सशस्त्र प्रहरीको २५ जना नेपाली सेनाको एमआई–१७ हेलिकोप्टरबाट उनीहरु छाङरु पुगेका हुन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रविणकुमार श्रेष्ठका अनुसार दार्चुलाको सुदरमुकाम खलंगाबाट दुई चरणमा गरि सुरक्षाकर्मीको टोली व्यास गाउँपालिका–१ छाङरुमा पुगेको हो। उनका अनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक मिलीबहादुर चन्दको नेतृत्वमा टोली गएको..
गृहको अनुमतिबिना बिहीबारदेखि काठमाडौं उपत्यका छिर्न नपाइने (विज्ञप्तीसहित)
काठमाडाैं, ३१ वैशाख । सरकारले जेठ १ गते बिहीबारदेखि देशभरको आवातजावत थप कडाइ गर्ने भएको छ। गत तीन दिनमा लगातार कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले थप कडाइ गरेको हो। बाहिर जिल्लाबाट काठमाडौं आउन अब जिल्ला प्रशासनको अनुमतिले पाइने छैन। यसका निम्ति गृह मन्त्रालयबाटै छुट्टै पास लिनुपर्नेछ। गृह मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर कुनै पनि सवारीसाधन काठमाडौं उपत्यका छिर्न पाउने छैनन्। पासको निवेदन दिँदा आउजाउ गर्नुको..
लिपुलेकबारे छलफल गर्न सरकारले बोलायो सर्वदलीय बैठक
काठमाडाैं, ३१ वैशाख । नेपाली भूमि मिचेर भारतले बाटो बनाएपछि सरकार र राजनीतिक दलको समान धारणा तय गर्न सर्वपक्षीय बैठक बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले विभादित भूमि भनेर स्वीकार गरेको स्थानामा एकतर्फी रूपमा सडक बनाएर उद्घाटनगरेपछि समान धारणा बनाउन सर्वपक्षीय बैठक डाकेका हुन् । बैठक बुधबार साँझ साँझ ४:३० बजेलाई बोलाइएको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाकार विष्ण रिमालले बताए..
नेपाल भारतसीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउनु पर्ने सांसदहरुको माग
काठमाडौं, ३१ वैशाख । राष्ट्रियसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले नेपाल भारतसीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउनु पर्ने माग गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरुलाई भारतीय गतिविधिहरुले आक्रान्त बनाएको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले काँडेतार वा पर्खाल लगाउन माग गरेका हुन् । सांसद इन्दु कँडरियाले सीमा क्षेत्रमा सरकारले काँडेतार लगाउन तयार भए एक वर्षको सेवा सुविधा दिन तयार रहेको बताइन् । अहिले लिपुलेक क्षेत्रमा..
भीम रावलले भने- कोरोना लागेका सुरक्षागार्ड एकमहिनादेखि बिदामा थिए
काठमाडौं, ३१ वैशाख । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री भीम रावलका सुरक्षागार्डलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । उनमा काेराेना पाेजेटिभ देखिएपछि उनी एकमहिनादेखि बिदामा रहेको रावलले बताएका छन् । उनले भने, 'उनी एकमहिनादेखि बिदामा थिए । श्रीमती बिरामी भएको हुँदा उनले बिदा लिएका थिए । केहीदिनअघि श्रीमतीलाई ठीक भएको र अब काममा आउँछु भनेर फोन गरेका रहेछन् । कोरोना चेक गरेर मात्रै..
भीम रावलको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्रका जवानमा पनि कोरोना संक्रमण
काठमाडाैं, ३१ वैशाख। सत्तारुढ नेकपाका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलको घरमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका एकजना जवानलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्थायी घर रामेछाप भएका २७ वर्षीय ती शसस्त्र जवान भक्तपुर दुवाकोटामा बस्दै आएका स्रोतले जनाएको छ। नेता रावलको सुरक्षामा ९ जना सशस्त्र प्रहरी खटिँदै आएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको नीलबाराही गणमा कार्यरत ती शसस्त्र जवान हाल टेकु अस्पतालमा..
लिपुलेक नजिक सुरक्षा पोस्ट खडा गर्न सशस्त्रको टोली लिएर गयाे सेनाको हेलिकप्टर
काठमाडौँ, ३१ वैशाख। भारतले नेपाली भूमि मिचेर बाटो बनाएको क्षेत्र लिपुलेक नजिकै नेपालले सुरक्षा पोस्ट खडा गर्ने भएको छ । त्यसका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई तथा सशस्त्र प्रहरीका एआइजी नारायणबाबुसहितको टोली बुधबार बिहान दार्चुलाको खलंगा गएको छ । खलंगाबाट सो हेलिकप्टरमा सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षकको नेतृत्वमा २५ सुरक्षाकर्मीसहितको टोली लिपुलेक नजिकैको छाङ्गरु जाने छ..
काठमाडौं : उपत्यकामा भेटिएका तीन जना कोरोना संक्रमित सबै लकडाउन छिरेको खुलेको छ। ती मध्ये भक्तपुरका दुई र काठमाडौं चन्द्रागिरि नगरपालिका ९ की ३३ वर्षिया महिला छन्। भक्तपुर निवासी २५ वर्षिया महिला पनि सुनसरीबाट बैशाख २९,गते नै काठमाडौ आएको खुलेको छ। उनी मोटरसाइकलको पास बनाएर काठमाडौं आएकी हुन्। काठमाडौं आइसकेपछि ठिमीस्थित साथीकै कोठामा बसेकी उनलाई अहिले टेकु अस्पताल लगिएको छ।..
कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि सरकारले लकडाउनमा थप कडाइ गरेको छ । वितरण गरिएका पास रद्द गर्दै गृह मन्त्रालयले बुधबारदेखि एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्ला जानमा पनि रोक लगाएको छ । मंगलबार एकैदिन ८३ नयाँ संक्रमित देखिएपछि कडाइ गरिएको हो । अब अत्यावश्यक अवस्थामा अन्तरजिल्लाको पासका लागि गृह मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्नेछ । उपत्यकाका जिल्लाले अन्तरजिल्लाको पास जारी गर्न भने सम्बन्धित जिल्लाको..
काठमाडौँ । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा पनि कोरोना संक्रमित भेटिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरले जिल्लाहरु सिल गर्ने तयारी गरेका छन् । गृह मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यस विषयमा तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग आवश्यक छलफल भएको छ । पछिल्लोपटक कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेमा १८ जना पर्साका, महोत्तरीका २ जना, धनुषाका २ जना, भक्तपुरका २ जना काठमाडौंका..
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दै, दुई एजेन्डा तय, एजेन्डा थप्न दबाब दिने असन्तुष्ट नेताको तयारी
काठमाडाैं, ३१ वैशाख। कोरोना महामारीका बीच पार्टीभित्र चर्किएको किचलो व्यवस्थापन नहुँदै भारतसँगको सीमा विवादको मुद्दा सतहमा आएपछि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअघि स्थायी कमिटी बोलाउने/नबोलाउने मात्रै होइन, २४ वैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकले छलफलका एजेन्डा नै तय गर्न नसकेपछि २५ वैशाखका लागि डाकिएको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको..
१० चैत, काठमाडौ. । सरकारले आज मंगलबारबाट सार्वसाधारणलाई घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को संक्रमण भेटिए लगतै सरकारले देशलाई पूर्ण रुपमा लकडाउने गर्ने निर्णय गरेको छ । फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै चैत ४ गते नेपाल आएकी एक युवतीमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो । कोरोनासम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सोमबार बसेको बैठकले आज मंगलबार विहान ६ बजेबाट एक..
काठमाडौं- नेपालमा मंगलबार राती थप २६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितको संख्या २ सय १७ पुगेको छ। मंगलबार दिउसो ५७ जनामा संक्रमण देखिएको थियो। साँझ थपिएका २६ जनासहित एकैदिन ८३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौं, भक्तपुर सहितको जिल्लामा संक्रमित भेटिएका छन्। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीका अनुसार पर्साका २२ देखि ६० वर्षका ६ जना..
एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी जारी भएका सबै सवारी पास रद्द
३० वैशाख, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी जारी भएका सबै सवारी पास रद्द गरेको छ । मुलुकमा कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला गृहले मंगलबार दिउँसो यो निर्णय गरेको हो । मंगलबार मात्रै ५७ जना कोरोना संक्रमित भेटिएपछि आवतजावतमा कडाइ गरिएको हो । गृह मन्त्रालयका उप–सचिव उमाकान्त अधिकारीले भने, ‘बिहीबारदेखि लागू हुने गरी यो निर्णय गरिएको हो..
कपिलवस्तुमा नर्समा देखियो कोरोना भाइरसको संक्रमण
काठमाडौं: नेपालमा पहिलो पटक स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित जिल्ला अस्पताल कपिलवस्तुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश ५ का प्रवक्ता रोशन लाल चौधरीले जानकारी दिएका छन्। चौधरीका अनुसार उनी जिल्ला अस्पताल कपिलवस्तुमा कार्यरत नर्स हुन्। बैशाख २७ गते शनिवार उनको थ्रोट स्वाब संकलन गरिएको थियो। उनीसहित अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको उपचारमा अग्रपकंतिमा खटिँदै आएका पाँच जना स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्वाव संकलन गरिएको..
कालापानी नजिकै दार्चुलाको छांगरु क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको फौज राख्न बुधबार नेपाली सेनाको हेलिकप्टर काठमाडौंबाट उड्ने भएको छ । आजको राजधानी दैनिक लेख्छ–सो कार्य सम्पन्न गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनमा मन्त्रालयले सैनिक हवाई निर्देशनालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । गृहमन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले बुधबार सेनाको हेलिकप्टरमार्फत सशस्त्रको टोलीलाई छांगरु पुर्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिए । त्यहाँ हाल प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा २५ जना सशस्त्र प्रहरी..
३० बैशाख, काठमाडौं । ललितपुर निवासी शताव्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी १०१ वर्ष पुगेका छन् । नेपाली कला, सँस्कृति र साहित्यमा योगदान गरेका जोशी वैशाख ३० गते मंगलबार १०१ वर्ष पुगेका हुन् । जोशी गत वर्ष एक सय वर्ष पुग्दा ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभर सार्वजनिक विदा दिएको थियो । साथै महानगरपालिकाले एक वर्षभर विभिन्न कार्यक्रम गरी जन्मशताव्दी मनाउने निर्णय गरेको थियो । तर यस..
३० वैशाख, जनकपुरधाम । सिरहाको लहानमा टाउको काटिएको अवस्थामा एक व्यक्तिको शव फेला परेको छ । लहान नगरपालिका वडा नम्बर १७ निवासी करिब ४० वर्षीय पुरुषको शव मंगलबार बिहान फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । घरदेखि ५५ मिटरको दूरीमा रहेको उनकै बारीमा टाउको काटिएको अवस्थामा शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका डिएसपी शरद कुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनको सोमबार राति नै हत्या..
प्रधानमन्त्री ओलीको गीतमा शिशिर योगीको संगीत, लकडाउन पछि घन्किनेछ गीत
१ मे (१९ वैशाख) अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस । रचनाकार तथा गायक शिशिर योगीको फेसबुकमा एकाबिहानै नोटिफिकेसन आयो । सांसद भगवती न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा रचित कविता ट्याग गरेकी थिइन् । र, पढेर प्रतिक्रिया दिन आग्रह गरेकी थिइन् । कविताको शीर्षक थियो, ‘अब आँसु खसाउनु पर्दैन’ । अब आँसु खसाउनु पर्दैन रगत बगाउनु पर्दैन नेपाली मन अब फुट्दैन राष्ट्रिय एकता टुट्दैन शान्ति अब यहाँ मर्दैन बढ्यो..
विश्वव्यापी बन्दै ‘नमस्ते’ संस्कार
शताब्दीकै ठूलो महामारीले संसारको मानव जीवन सङ्कटमा पारेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नाम दिइएको भाइरसले लाखौँ मानिसको ज्यान गइसकेको छ । संसारभरि नै मानिस घरभित्र बसेर एक जीवाणुुसँगको हतियारविहीन लडाइँमा छन् । यो भाइरस र एकान्तबासको अवस्था कहिले हटेर जान्छ थाहा छैन । विज्ञका अनुसार यसको असर दुई वर्षसम्म रहन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कोरोना कहरपछि विश्वका मानिसको आनीबानी, सामाजिक जीवनका..
२९ बैशाख २०७७ कपिलवस्तु : कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि जिल्लालाई सिल गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोमबार दिउँसो बसेको सुरक्षा समितिको बैठकबाट आज साँझ ५ बजेदेखि जेठ ५ गते राती १२ बजेसम्मका लागि सिल गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घ नारायण पौडेलले बताए। यस अवधिमा जिल्लामा अति आवश्यक वस्तु ढुवानी गर्ने सवारी साधन, एम्बुलेन्स, शववाहन तथा राजमार्ग भएर गुड्ने..
Results 9813: You are at page 19 of 328